China Liquid Oxygène sy Nitrogen Production Plant / Liquid Oxygen Generator mpanamboatra sy mpamatsy | OR
Oxygène Liquidia sy Zavamaniry Famokarana Nitrogen / Generator Oxygène Liquid
Fantatra amin'ny fahaizanay injeniera miavaka amin'ny famokarana zavamaniry ôksizenina ranoka izay mifototra amin'ny teknolojia fanodinana cryogenika. Ny famolavolana marina dia mahatonga ny rafitry ny entona indostrialy azo antoka sy mandaitra ary miteraka vidiny ambany amin'ny asa. Vita miaraka amina fitaovana sy singa avo lenta, maharitra maharitra ela ny zavamaniry ôksizena ranonay mitaky fikojakojana farany ambany. Noho ny fanarahanay ny fepetra fifehezana kalitao henjana dia nomena mari-pankasitrahana toy ny ISO 9001, ISO13485 sy CE izahay.
1.Air Separation Unit miaraka amin'ny mari-pana sivy tsotra amin'ny mari-pana, ny expander booster-turbo, ny tsanganana fanitsiana tsindry ambany, ary ny rafitra fitrandrahana argon arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
2.Araka ny filan'ny vokatra, azo atolotra ny famatrarana ivelany, famatrarana anaty (fanamafisana ny rivotra, fanamafisana ny azota), fanindriana ny tena sy ireo dingana hafa.
3.Ny famolavolana firafitry ny ASU, fametrahana haingana eo amin'ny toerana.
4.Extra dingan'ny tsindry ambany an'ny ASU izay mampihena ny tsindry fandefasana rivotra sy ny vidin'ny fandidiana.
5.Fomba fizahana argon mandroso sy taha tahan'ny fitrandrahana argon ambony.
Air Compressor: Ny rivotra dia voatsindry amin'ny tsindry ambany an'ny zana-kazo 5-7 (0.5-0.7mpa). Vita amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo compresseur farany (Screw / Centrifugal Type).
Rafitra fampangatsiahana mialoha: ny dingana faharoa amin'ny fizotrany dia ny fampiasana ny vata fampangatsiahana ho an'ny fampangatsiahana mialoha ny hafanana amin'ny hafanana manodidina ny 12 deg C alohan'ny hidirany ao amin'ilay mpanadio.
Fanadiovan-drivotra amin'ny alàlan'ny fanadiovana: miditra amin'ny mpanadio ny rivotra, izay voaforon'ny drivotra sivivika kambana môlekiera kambana izay miasa mifandimby. Ny Molecular Sieve dia manasaraka ny dioksidan'ny karbaona sy ny hamandoana amin'ny rivotra alohan'ny alohan'ny ahatongavan'ny rivotra amin'ny fisarahana Unitiona.
Fangatsiahana rivotra an'ny cryogenika amin'ny alàlan'ny expander: ny rivotra dia tsy maintsy ampangatsiahina amin'ny mari-pana ambanin'ny zero noho ny fifangaroana. Ny vata fampangatsiahana cryogenic sy ny fampangatsiahana dia omen'ny expander turbo tena mahomby, izay mampangatsiaka ny rivotra amin'ny hafanana ambanin'ny -165 ka hatramin'ny 170 deg C.
Ny fampisarahana ny Air Liquid ho lasa Oxygène sy Nitrogen amin'ny Column de Separation Air: Ny rivotra miditra ao anaty lozisialy ambany fantsom-bokotra dia mampidina hafanana, tsy misy solika ary tsy misy gazy karbonika. Izy io dia mangatsiatsiaka ao anatin'ny mpanova hafanana ambanin'ny mari-pana ambanin'ny zero noho ny fizotry ny fanitarana ny rivotra ao amin'ny expander. Antenaina fa hahatratra delta fahasamihafana farafahakeliny hatramin'ny 2 degre Celsius amin'ny faran'ny mafana amin'ny fifanakalozana. Manjary liquefied ny rivotra rehefa tonga eo amin'ny tsanganana fisarahana amin'ny rivotra ary misaraka ho oksizena sy azota amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanitsiana.
Ny Oxygène Liquid dia voatahiry ao anaty tanky fitehirizana ranon-javatra: ny oxygen oxygen dia fenoina tanky fitahirizana rano izay mifamatotra amin'ny liquefier mamorona rafitra mandeha ho azy. Ny fantsom-pitrandrahana dia ampiasaina hamoahana oxygène azo avy amin'ny tanky.
Previous: Karazana kriogenika karazana alikaola fisarahana bitika kely indostria mpamokatra azota mpamokatra argon generator
Manaraka: Zavamaniry nitroka ranoka zavamaniry Gas Nitrogen gazy, Zavamaniry nitroka madio misy fiara mifono vy
Fitaovana oksizenina ranoka